Chii chinonzi POE? Yakabhadharwa, Yakabhadharwa, Yakabhadharwa ... Uye Yakagovaniswa ... uye Inoshandurwa Midhiya | Martech Zone
Chii chinonzi POE? Yakabhadharwa, Yakabhadharwa, Yakabhadharwa… Uye Yakagovaniswa ...
Chitatu, Ndira 13, 2021 Chitatu, Ndira 13, 2021 Douglas Karr
Pfungwa chiri chidimbu yenzira nhatu dzekuparadzira zvemukati. Mepu dzakabhadharwa, Dzakapihwa uye Dzakatemerwa midhiya inzira dzese dzinoshanda dzekuvaka masimba ako uye nekuparadzira kusvika kwako munhau dzezvemagariro.
Yakabhadharwa, Yakabhadharwa, Yakawanikwa Midhiya
Paid Midhiya - ndiko kushandiswa kwenzira dzekushambadzira dzakabhadharwa kutyaira traffic uye neicho chizere meseji kune yako zvemukati. Iyo inoshandiswa kugadzira kuzivisa, kusvetuka dzimwe nzira dzenhau uye kuita kuti zvemukati zvionekwe nevateereri vatsva. Matekiniki anosanganisira kudhinda, redhiyo, email, kubhadhara pakudzvanya, facebook ads, uye kukurudzira tweets. Kubhadhara vanokurudzira vanogona zvakare kubhadharwa midhiya kana chibvumirano chasvika muripo.
Muridzi weMedia - midhiya, zvemukati uye mapuratifomu ayo ari zvishoma kana zvakakwana muridzi kana anotongwa nebhizinesi. Basa ndere kugara zvirimo, kuvaka chiremera uye hukama, uye pakupedzisira kuita tarisiro kana mutengi. Matekiniki anosanganisira kutsikisa blog mablog, kuburitswa kwemapepa, whitepapers, kesi zvidzidzo, ebook uye zvemagariro midhiya inogadziridza.
Yakawana Midhiya - ndiko kuwanikwa kwemataurirwo nezvinyorwa pamatanho akasimbiswa asina kuwanikwa kuburikidza nekushambadzira - kazhinji kacho ndiko kutaurwa kwenhau. Vakawana midhiya sosi kazhinji vanotova nemvumo, chinzvimbo uye kukosha kune yakapihwa indasitiri kana musoro wenyaya, saka kuwana kutaurwa kunobatsira kuvaka chiremera chako uye kuparadzira kusvika kwako. Matekiniki anosanganisira kudyidzana neruzhinji, kutsvaga kwehupenyu, uye zvirongwa zvisina kubhadharwa zvekusvikira maindasitiri anokurudzira uye mabloggi pamwe nenzvimbo dzekudyidzana.
Ko Zvakadii Nekugovana Midhiya?
Dzimwe nguva vatengesi vanoparadzanisawo Yakagovaniswa Midhiya kutaura zvakananga kumatekisheni ekutyaira traffic kuburikidza nevezvenhau kugovana. Izvi zvinogona kugarwa kuburikidza nevezvenhau kushambadzira, kushambadzira kushambadzira, kana kungovandudza nzira dzekugovana munharaunda. Yakagovaniswa midhiya nzira inogona kuve mubatanidzwa weyakabhadharwa, muridzi, uye akawana midhiya akaputirwa mune imwe.
Mira… Uye Yakatendeuka Midhiya?
Iyi ndiyo nzira iri kukura yevatengesi vezvinhu. Vashandurwa midhiya zvakare mubatanidzwa weyakabhadharwa, ndeyako, uye yakawanikwa midhiya. Muenzaniso unogona kuve kunyora kwangu kweForbes. Ini akawana nzvimbo yekunyora ine Forbes Agency Kanzuru… Uye iri rwakabhadharwa (yegore) chirongwa. Zviri anazvo naForbes vane edhisheni uye vanosimudzira vashandi vakapihwa vanoona kuti chero zvinyorwa zvakaburitswa zvinosangana nemabatiro avo akasimba ehutano hwekusimbisa uye zvinogoverwa zvakanyanya.
POE Haiganhurirwe Kune Yemagariro Media
Iyi inonakidza infographic pane POE kubva ku Inopindirana Yekushambadzira Bureau yeCanada uye Boka reBrainstorm. Iyo inotaura yakanangana nePOE kubva kune yemagariro midhiya kona iyo yandinotenda iri zvishoma kugumira. Zvemukati kushambadzira, kushambadzira, kushambadzira kwekushambadzira, kushambadzira nhare ... nzira dzese dzekutengesa dzakanyatso batanidzwa nechero ipi inobhadharwa, muridzi, kana muhoro midhiya zano.
Uye aya marongero anogona kunyatso kukura kupfuura kwenzvimbo yedhijitari mukushambadzira kwetsika. Mabhizinesi ari kudzokororazve zvinyorwa zvekudhinda, semuenzaniso, kuita zvemadhijitari. Mabhizinesi ari kutenga nzvimbo yekushambadzira pamabhodhi ekutyaira kutyaira kune avo vane mawebhusaiti. Zvakare… POE yakakosha kune chero akabhadharwa kana echiratidziro nzira yekutengesa.
Iyo POE infographic inofamba iwe kuburikidza:
Kutsanangura POE mamodheru
Mienzaniso yenzira dzePOE
Maitiro Ekuronga Yako POE zano
Matekiniki nemaitiro ePOE
Dhijitari POE nzira pamusoro pemidziyo
Kubatanidzwa zvinhu zvine chekuita nePOE
Mhando dzePakabhadharwa, Yakabhadharwa, uye Yakawana Midhiya
Kuyera kwePOE kubudirira
Tags: kushambadzayakabatana midhiyayakawana midhiyayakawana pasocial mediaFacebookIAB CanadaInopindirana Yekushambadzira Bureau yeCanadakushambadzira kwehupenyunhepfenyuromuridzi vezvenhauvanobhadharwa midhiyaakabhadharwa pasocial mediapoeakagovana midhiyaBrainStorm Boka
ActionIQ: Chizvarwa Chinotevera Mutengi Dhata Platform Kuenzanisa Vanhu, Tekinoroji, Uye Maitiro